शब्दकोश: April 2012
रामकलीले माझेको थाल
देशभन्दा चम्किलो लाग्छ,
रामकली पनि यही देशकी हो ...
- (Feb 1, 2012)
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, April 19, 2012 1 : Comments
साझा प्रकाशनबाट छापिने 'गरिमा' मासिकको २०६८ चैत अंकमा मेरो निबन्ध छापिएको थियो, पत्रिका पढ्न नपाउने साथीहरुको लागि सोही निबन्ध यहाँ राखेको छु -
कहिलेकाहीं यो समयलाई नै समय दिन मन लाग्छ । अपेक्षा-भयदेखि वितरागी रहेर ओम स्वाहाको शैलीमा आफूलाई त्यसै बगाइदिनु ... । समयकै सिरानी र डस्नामा दैनिकी फिट्दै आए पनि कति जनाले पो समयलाई समय दिँदा हुन् र ? यस्तै भाव आएर मन र मगजमा ओथारो बसिरहेको बेला सहरतिर निश्फिक्री निस्किन मन हुन्छ । उसै पनि मन भनेको मसी जस्तो न हो, यसो छर्किए पुग्ने ।
पन्ना- १ :
मान्छेहरूको बजारमा आफूलाई कतै नभेट्ने गरी हराइदिन र एक कुनामा टुसुक्क बसेर त्यो बजारमा आफैंलाई नियाल्नु छ भने सहर उत्तम मञ्च हो । म भने यसको लागि नयाँ सडक परको वसन्तपुरले पर्खिरहेको पाउँछु । वसन्तपुरमा वसन्त छैन त के भयो, मान्छेहरूको हरियाली त छ ! उः मन्दिरको खाँबोमा आड लागेर गोडा हल्लाउँदै लोलाइरहेका एक जोडीको आँखाभरि पालुवा लहराइरहेको देखिन्छ । तिनको मनमा त अझ सिङ्गो जंगल नै सुसाइरहेको होला । परमाणु बम र तेल कुवाको खिचातानीमा हुनसक्ने सम्भावित विश्वयुद्धको झल्का तिनको मनको दायरामा परेका छैनन् । कामना छ, नपरोस् पनि । अब त्यो जोडीको गोपनीयतालाई सम्मान गरेर अलि फराकिलो बनौं । साँझको बेला घामको मन्द छाप गालामा बोक्दै मान्छेहरू उछिनाउछिन गर्दै छन् । छन् भरिया, छन् मन्दिरका सैनिक गार्ड, छन् लट्टे बाबाजी, छन् घुमघाममा कता-कताबाट आएका गोराहरू ।
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, April 13, 20127: Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, April 01, 20125: Comments